Raadaarka duufaanka: waxa uu yahay, waxa uu u yahay iyo muhiimadda | Shabakadda Saadaasha Hawada
Jarmal Portillo | 03/01/2022 09:47 | Dhacdooyinka saadaasha hawada
Maalmahan, iyada oo ay ugu wacan tahay tignoolajiyada maalin kasta la horumariyo, bini'aadamku waxa uu u saadaaliyaa cimilada si sax ah oo sax ah. Mid ka mid ah aaladaha tignoolajiyada ee lagu fuliyo saadaasha cimilada ayaa ah raadaarka duufaanka. Sida magaceeda ka muuqata, waxay naga caawin kartaa saadaalinta daruuraha qaro weyn iyo xasillooni ku filan oo sababi karta duufaanno.
Maqaalkan waxaan ku sharxi doonaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato radar duufaanka, maxay yihiin sifooyinka iyo faa'iidada.
1 Waa maxay radar duufaan
2 Sida uu u shaqeeyo Raadaarka duufaanku
3 Taariikhdii iyo codsiyadii hore
4 Muhiimadda qorsheynta duulimaadka
Waa maxay radar duufaan
Raadaarka duufaanku waa qalab weyn oo ka kooban taawar dhererkeedu yahay 5 ilaa 10 mitir oo leh qubbad wareegsan oo ku daboolan caddaan. Waxa jira dhawr qaybood (anteenooyin, furayaal, gudbiyeyaal, qaatayaal...) kuwaas oo ka kooban radar-ka qubbadan laftiisa.
Wareegyada hawlgalka ee raadaarka ayaa oggolaanaya qiyaasida qaybinta iyo xoojinta roobka, ama qaab adag (baraf ama roobdhagaxyaale) ama qaab dareere ah (roob). Tani waxay lama huraan u tahay la socodka iyo la socodka saadaasha hawada, gaar ahaan xaaladaha ugu jilicsan, sida duufaanada aadka u daran ama roobabka culus, halkaas oo ay jiraan meelo aad u xooggan oo roobab ah, taas oo ah, marka roob badan uu ku ururo meel keliya waqti gaaban.
Sida uu u shaqeeyo Raadaarka duufaanku
Mabda'a hawlgalka ee radar duufaanku wuxuu ku salaysan yahay qiiqa shucaaca nooca microwave-ka ah. Laxahaas ama garaaca shucaaca ayaa hawada u maraa qaab dhowr lobes ah. Marka garaaca garaaca wadnaha uu la kulmo caqabad, qayb ka mid ah shucaaca soo baxaya ayaa u kala firdhisan (firdhay) dhammaan jihooyinka iyo qayb ka muuqda dhammaan jihooyinka. Qaybta shucaaca ee ka muuqda oo ku faafinaya jihada raadaarka waa calaamadda ugu dambeysa ee aad hesho.
Nidaamku wuxuu ku lug leeyahay samaynta shucaac badan oo garaaca, marka hore iyada oo la dhigayo anteenada radar xagal sare oo gaar ah. Marka xagasha sare ee anteenada la dhigo, waxay bilaabi doontaa inay wareegto. Marka anteenadu iskeed u wareegto, waxay soo daysaa shucaac shucaac ah.
Kadib marka anteenadu dhameysato socdaalkeeda, isla nidaamka ayaa la sameeyaa si kor loogu qaado anteenada xagal gaar ah, iyo wixii la mid ah, si loo gaaro tiro go'an oo xagal sare ah. Sidan ayaad ku heleysaa waxa loogu yeero xogta radar polar - xog radar ah oo ku taal dhulka iyo sare ee cirka.
Natiijada habka oo dhan Waxa loo yaqaan skaanka goobeed waxayna qaadataa ilaa 10 daqiiqo in la dhamaystiro. Sifada garaaca shucaaca la sii daayo waa in ay noqdaan kuwo aad u tamar badan, sababtoo ah inta badan tamarta la sii daayo ayaa lunta oo kaliya qayb yar oo ka mid ah calaamaduhu waa la helayaa.
Sawir kasta oo meel bannaan ayaa soo saara sawir, kaas oo ay tahay in la farsameeyo ka hor inta aan la isticmaalin. Habaynta sawirkan waxa ka mid ah hagaajino kala duwan, oo ay ku jiraan ka saarida dhulalka calaamado been abuur ah, taas oo ah, saarista buurta calaamado been abuur ah. Laga soo bilaabo geeddi-socodka oo dhan ee lagu sharraxay korka, waxaa la soo saaray sawir muujinaya goobta raadaarka. Milicsigu waa cabbirka baaxadda ka qayb qaadashada tamarta korantada ee radar ka dhibic kasta.
Taariikhdii iyo codsiyadii hore
Kahor abuurista raadaarka roobka, saadaasha cimilada waxaa la xisaabin jiray iyadoo la isticmaalayo isla'eg xisaabeed, saadaasha hawada waxay isticmaali karaan isla'eg xisaabeed si ay u saadaaliyaan cimilada. 1940-meeyadii, raadaarada waxaa loo isticmaalay in lagu eego cadawga Dagaalkii Labaad ee Adduunka; Raadaradani waxay inta badan ogaan jireen calaamado aan la garanayn, kuwaas oo ah waxa aan hadda ugu yeerno Yufeng. Dagaalka ka dib, saynisyahano ayaa si fiican u yaqaan qalabka oo u beddelay waxa aan hadda u naqaanno roobka iyo / ama radar roobaadka.
Raadaarka duufaanku waa kacaan xagga saadaasha hawada: pwaxay u ogolaataa machadyada saadaasha hawada ee waaweyn inay helaan macluumaadka saadaasha, Waxaad sidoo kale horay u fahmi kartaa dhaqdhaqaaqa daruuriga ah, iyo sidoo kale jidkeeda iyo qaabkeeda. , Heerka iyo ixtimaalka sababa roobab.
Fasiraadda saadaasha uu raadaarka roobabku bixinayo waa mid adag, sababtoo ah inkasta oo ay horu-mar ka tahay bulshada saadaasha hawada, radarku ma bixiyo xog gaar ah oo ku saabsan masaafada, wayna adagtahay in la ogaado goobta saxda ah ee bartilmaameedka saadaasha hawada. Tani waa luqadda lagu hadlo.
Si loo sameeyo saadaasha ugu saxsan, khubarada saadaasha hawada waxay daraasad ku sameeyaan dhaqdhaqaaqyada hore ee suurtogalka ah. Marka iftiinka qorraxdu uu ku dhufto daruuraha, inta jeer ee hirarka korantada ee ka soo baxa radar ayaa isbeddelaya, taas oo noo ogolaanaysa inaan fahamno sifooyinka roobabka ee dhici kara.
Haddii isbeddelku yahay mid wanaagsan, hababka hore iyo suurtogalnimada roobabku way kordhi doonaan; Haddii kale, haddii isbeddelku xumaado, hore ayaa dib u dhacaya, suurtogalnimada roobabkuna way yaraanayaan. Marka dhammaan macluumaadka laga helo radar-ka loo gudbiyo sawirka kombiyuutarka, hore ee roobka ayaa loo kala saari doonaa iyadoo loo eegayo xoogga roobka, roobdhagaxyaalaha ama barafka ... .
Muhiimadda qorsheynta duulimaadka
Waxa ugu horreeya ee la sheego waa radar cimiladu waa qalab wax lagu fiirsado, ma aha qalab saadaaliya, markaa way na tusaysaa. xaaladda roobka (xaaq) marka xogta la ururiyo.
Si kastaba ha ahaatee, markaan aragno sida qadar badan oo roobaad ah uu u kobcayo wakhti ka dib, waxaan "saadaalin karnaa" dabeecadeeda mustaqbalka: ma sii joogi doontaa meesheeda? Ma u dhaqaaqi doontaa jidkayaga? Waxaa ka sii muhiimsan, ma qorsheyn karnaa duulimaadyo si aan uga fogaano meelaha ay ka jiraan duufaano waaweyn iyo roobab?
Xogta uu ururiyay raadaarka waxaa lagu soo bandhigay qaabab kala duwan oo muuqaal ah. Marka xigta, waxaan sharxi doonaa labada dhinac ee ugu muhiimsan ee qorsheynta duulimaadka oo aan tixraaci doono qaar kale oo ka kooban Waxa kale oo laga soosaaraa cabbirada radar Doppler.
Sida aad arki karto, raadaarka duufaanku aad buu faa'iido ugu leeyahay saadaasha cimilada wuxuuna naga caawin karaa qorsheynta duulimaadka. Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto radar-ka duufaanka iyo sifooyinkiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Raadaarka duufaanka